Royal Taste Restaurant 821 views
Taw Win Center အောက်ထပ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Royal Taste ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးမှာ စားခဲ့တာလေးတွေ MyLann ပိတ်သတ်ကြီးများကို ဖောက်သည်ချပါရစေနော်။
Honey တို့ရောက်သွားတဲ့ အချိန်က နေ့ လည် ဆိုတော့ ဗိုက်တော့ တော်တော်လေး ဆာနေပြီ ။ အဲ့ဒါနဲ့ဒီဆိုင်လေးရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဆိုင်ကို ရောက်သွားတော့ Menu လေးကို လာချပေး ကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပြန်လှန်အောင်ကြည့်ပြီးမှ ကင်ချီထမင်းသုပ်(၂)ပွဲ၊ Vermicelli Hot Pan, ရေခဲသုပ် နဲ့ Milk Tea မှာဖြစ်ခဲ့တရ်… သိပ်လဲမစောင့်ရပါဘူး မြန်ပါတရ်… နောက်ခဏနေတော့ မှာထားတာတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလာချပေးတရ်… အဲ့ဒီတော့ အစားအစာနဲ့ပက်သက်လို့ပြောရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်သွားပီပေါ့နော်…
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ‪#‎ကင်ချီထမင်းသုပ်‬ သူကစားလို့ကောင်းတရ်… တချို့ဆိုစားရတာအီတယ်။ အစပ်အဟပ်မတည့်လို့ပဲပြောရမလား…ကိုယ်တွေမြန်မာပါးစပ်နဲ့ပဲမတည့်လို့လား စားရတာတစ်မျိုးပဲ နှစ်ဇွန်း၊ သုံးဇွန်းစားပီးရင်ဆက်မစားနိုင်တော့ဘူး… ဒီဟာလေးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး စားလိုက်တာခဏလေးနဲ့ကို ကုန်သွားတရ် (ကိုယ်ကပဲငတ်ကြီးကျလွန်းသွားလားမသိ… :P) ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလဲ တန်ပါတယ်။ ၂၅၀၀ ပဲရှိတယ်။ ဒီလောက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲနော်…
နောက်တစ်ခုက ‪#‎Vermicelli_Hot_Pan‬ သူကကျတော့ Hot Pot အသေးစားလေးပေါ့နော်. ဟန်နီတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စားတာတောင်မကုန်ပါဘူး… ရှူးရှူး ရှဲရှဲ နဲ့ သောက်လို့အရမ်းကောင်းတယ်။ သူကတော့မီးအပူပေးပီးအိုးလေးသေးသေးလေးနဲ့လာချပေးတာ မိုက်မှမိုက်.. ကိုယ်တွေကလဲရှူးရှူးရှဲရှဲဆိုသိပ်ကြိုက်လေ.. အဲ့ထဲမှာကြာဇံ၊ အသီးအရွက်လေးတွေလဲပါတရ် ကြက်သားဖတ်လေးတွေရောပဲ… သောက်ရတာ ချဉ်ငံစပ်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့တကယ်အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ…ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်ရှိမရ်ထင်လဲ…မှန်းကြည့်နော် ဘော်ဒါတို့…အရမ်းတန်တရ် (၃၀၀၀)ပဲရှိပါတရ်… ပေးလိုက်ရတဲ့ဈေးထက် စားလိုက်ရတဲ့အရသာကပိုတန်ပါတယ်။
စားလို့သောက်လို့ပီးသွားတော့ Milk Tea လေးသောက်ခဲတယ်(ဟန်နီ့သူငယ်ချင်းသောက်တာပါ ဟန်နီကမြည်းကြည့်တာ grin emoticon ) သူကပြောရမယ် ဆိုရင်တော့လက်ဖက်ရည်အေးပေါ့နော်… အရမ်းမချိုပဲအဆိမ့်ဘက်သွားတဲ့ပုံမျိုးလေး.. ဒါမဲ့တခုထူးခြားတာက Jelly ကျောက်ကျောဖတ်လေးတွေပါတရ် စားရတာ တုံအိ တုံအိလေး…. မိုက်တယ်။
အဲ့ဆိုင်မှာ ဟန်နီ့အကြိုက်ဆုံး ‪#‎Royal_Special‬. သူကရေခဲသုပ်ပါပဲ… ခွက်ထဲမှာထည့် ထားတာကိုကစားချင်စရာလေး… အထဲမှာလဲ ရေခဲသုပ်ဆိုသလိုပဲ အကုန်ပါတယ်။ ယိုတွေလဲပါတယ် မြေပဲ ကျောက်ကျော အစုံပဲ… စတော်ဘယ်ရီအရည်နဲ့ဆိုတော့လဲကိုယ်တွေအကြိုက်ပေါ့နော့်…ပီးတော့တစ်ခွက်ကို ၁၅၀၀ ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်. စားရသောက်ရတာလဲများသွားပီ. ဗိုက်လဲတင်းသွားပီ… ဒီဆိုင်လေးက ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လဲမဆိုးဘူး၊ အရသာလဲကောင်းတတယ်။ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးလဲရှိတယ်။ Service ကလဲမဆိုးဘူးလို့ စိတ်ထဲတွေးရင်း ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ စိတ်ထဲမှာလဲကျေနပ်သွားခဲ့တယ် (ဗိုက်ပြည့်သွားပီကိုး…ဟီး grin emoticon ) ပြီးတော့ နောက်တစ်ခါသွားထပ်စားမယ်လို့ တွေးရင် MyLann ရဲ့ ဘော်ဒါတွေကိုလဲမျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်… Taw Win Center ရောက်ရင် Royal Taste ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုသွားစားကြည့်ကြပါအုံးလို့ 